पर्सि शुक्रबार देशैभर सार्वजनिक बिदा ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/पर्सि शुक्रबार देशैभर सार्वजनिक बिदा !
काठमाडौँ, फागुन ७ । पर्सि शुक्रबार अर्थात् फागुन ९ गते देशैभर सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ ।नेपाल सरकारले महाशिवरात्रीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । सरकारले महाशिवरात्रीमा हरेक वर्ष बिदा दिने गरेको छ ।
सेना दिवससमेत पर्ने शिवरात्रीको दिन सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थासहितका कार्यालय बन्द रहने छन् । उता प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस–२०७६ का अवसरमा आज शुभकामना दिँदै सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।